Nyochaa: Ubuntu Mate Beta 2, desktọọpụ maka ndị na-enweghị uche | Site na Linux
Ọ bụ onye dere edemede a Percaff_TI99 ewepụrụ ya kpamkpam GUTL Portal ọ gbanwewokwa obere mmezi na mbipụta ya
Continueswa na-aga n'ihu n'ihu na ya na teknụzụ ọhụrụ. GNU / Linux abụghị onye a gụpụrụ na ya, ọ bụ ihe ama ama na ma ụlọ ọrụ Ihe ederedel (Ubuntu), dị ka ndị mmepe nke - Gnome, Ha kpebiri ịgbanwe site na ihe ọtụtụ na-akpọ nhazi desktọọpụ ọhụrụ.
Mmụba nke ngwaọrụ mkpanaka na mbadamba gbara mmepe nke Gnome shei (GTK3) na Ubuntu Unity iji melite ndakọrịta na arụpụtaghị ọganihu ndị a. E leghaara mmepe Desktọpụ anya Gnome omenala (GTK2), ihe dị mkpa ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịsọ mpi n'ahịa taa.
Mkpebi a bụ nnukwu ọmarịcha nkà na ụzụ maka ọtụtụ ndị ọrụ, ndị ọzọ (gụnyere ndị mmepe) mere ka ha nwee obi abụọ banyere ahụmịhe desktọọpụ. E nwekwara ndị na-eche nke ahụ Ubuntu 10.04 Lucid Lynx ọ bụ ihe kachasị mma nke Ubuntu, na uche m adịghị iche na niile.
N’ebe a, akọ na uche dị nnukwu mkpa; ma dabere na nke a, onye nrụpụta kpebiri idebe desktọọpụ ahụ Gnome Omenala kere oru MGBE.
Ugbu a desktọọpụ desktọọpụ MGBE (MDE) dị na nchekwa nke nkesa kachasị amara. Nke a abụrụla nnukwu nkwado na Ọrụ ahụ MGBE, Clement lefebvre (Linux Mint) bụ otu n'ime ndị mbụ nyere nkwado ya.
Nkesa nke na akwado MGBE:
Ebe nchekwa na-ezighi ezi (ezubere itinye ya na ụlọ ọrụ gọọmentị).
Na usoro *BSD:
Otú ọ dị a nkesa na-efu efu ma eleghị anya na-atụ anya site na ọtụtụ ndị ọrụ nke Ubuntu nke ka na-ejigide mmasị ha maka desktọọpụ Gnome ọdịnala bụ Ubuntu MGBE.
Dabere na saịtị gọọmentị:
Ubuntu MATE Ọ bụ sistemụ kwụsiri ike, dị mfe iji yana desktọọpụ nwere ike ịhazi. Odiiri ndi choro igosiputa ihe di nma nke desktọọpụ ha, kọmpụta na netwọkụ ma họrọ ihe osise tebụl ọdịnala. Iji ihe eji achọ ihe ọfụma ọ dabara adaba maka ebe ọgbara ọhụrụ yana akụrụngwa ochie.
Na mgbakwunye Ubuntu MATE esetịpụrụ usoro ebumnuche na ebumnuche:
Enwere ike ịnweta mmadụ niile, n'agbanyeghị asụsụ na ike anụ ahụ.
Mee ka nnabata onye ọrụ bawanye Ubuntu na tebụl MGBE.
Ubuntu dị ka ihe ọzọ maka kọmputa ndị na-esighi ike iji rụọ ọrụ desktọọpụ.
Nhọrọ mbụ nke ikpo okwu Ubuntu maka ihe ngwọta dị iche iche dịpụrụ adịpụ dị ka LTSP
Weghachi obi ụtọ ụbọchị nke Ubuntu tupu iwebata Ịdị n'Otu
Jiri isiokwu na nka dị ka Ubuntu maka gịnị Ubuntu MATE maara ozugbo.
Mgbe enwere ike inye aka Debian ya mere obodo nke Debian y Ubuntu ha na-erite uru.
Nhọrọ nke nchịkọta nke ga-akwado arụmọrụ na nkwụsi ike nke ịdị ọcha na echiche efu.
Inye ogige nke ndị ọrụ Linux ndị na-ahọrọ a omenala desktọọpụ atụ.
Ọ ego n'anya dị ka ihe ukara "ekpomeekpo" nke Ubuntu.
2 Ubuntu Nwunye anya
3 Ubuntu Nwunye Ngwa
4 Ubuntu Mate atụmatụ
5 Obere ihe akụrụngwa chọrọ maka Ubuntu Nwunye
6 Akwadoro Akụrụngwa chọrọ
Ihe osise ubuntu-mate-14.10-beta2-desktọọpụ-i386.iso M ibudatara ya na ukara na saịtị nke Ubuntu MATE. Echichi ahụ mere na Virtualbox nke m kenyere 900 MB nke RAM na 8 GB nke ohere diski.
Ọkachamara na-eduzi anyị site na usoro nrụnye dum, dị ka ọtụtụ nkesa dabere na Ubuntu. Onye ọrụ ga-enweghị nsogbu na nke a; Otú ọ dị, ị nwere ike buut dị ndụ media enweghị wụnye usoro.
Chọrọ 6,3 GB nke ohere diski
Nwụnye (dị (jiri dum disk, encrypt nkebi, iji LVM)
Nhazi: Onye ọrụ na Okwuntughe
Nbanye na-achịkwa ya LightDM. Dị ka atụmatụ ọzọ ọ na-enye anyị ka anyị bido nnọkọ ọbịa, nhọrọ a anaghị amasị m nke ukwuu ọ bụrụgodi data niile onye ọbịa chekwara ka ị na-ehichapụ mgbe ị na-apụ. Isi okwu ya bụ na onye ọ bụla ga-enwe ike ịnweta sistemụ m n’agaghị eji paswọọdụ, ọ bụ echiche onwe onye.
Virtualbox Ọ naghị agbanwe ihuenyo ahụ na akpaghị aka ka ọ na-eme na ọtụtụ nkesa, mana ọ na-edozi ya ngwa ngwa site na iji menu VirtualBox: Ngwaọrụ »Fanye CD onyonyo nke«Mgbakwụnye»Ma ọ bụ site na ịpị Onye ọbịa + D. mgbe ahụ site na ọnụ, anyị na-etinye onwe anyị na adreesị ebe CD na-etinye ma na-eme ihe ntinye akwụkwọ.
Ubuntu Nwunye anya
Akụkụ a bụ ebe achọpụtara nnukwu mgbanwe, isiokwu ọhụrụ maka akwụkwọ ahụ aja na windo chọọ mma nwere ike ịlelerịrị na ụdị a 14.10-beta2.
Ma isiokwu GTK site na ndabara Ambiant-Nwunye na akwụkwọ ahụaja e mere na-acha akwụkwọ ndụ na-aj u dị ka kpagburuibe agba (na-ezo aka na agba nke yerba mate akwukwo) na-enweghị na-apụ apụ kpochapụwo gburugburu nke Ubuntu. E nwere ọtụtụ na ndị ọzọ nkesa na ndị a pụrụ iche na agba.
Nke a nwere ike bụrụ ihe ga-efunahụ na desktọọpụ Gnome oge a, ịdị mfe nke nhazi.
Ubuntu Nwunye Ngwa
Ubuntu Mate Ọ na-abịa na ọnụ ọgụgụ dị mma nke ngwa, ma e wezụga ịnweta (nke pụtara na ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ distros niile) m kwuru:
Anya onyonyo Anya nke MATE 1.8.0
Igbe nke 1.8.1
Editọ ederede Pen 1.8.1
Akwụkwọ Document Lectern 1.8.0
Engrampa Njikwa faili 1.8.0
Ubuntu MATE adịghị nwere multimedia na flashplugin codecs arụnyere, dị ka ọ na-adị na Ubuntu ngwugwu ga-ibudata ubuntu-mgbochi.
Ubuntu Mate atụmatụ
Xorg-ihe nkesa 1: 7.7
Onye na -eme mkpọtụ 1.4.1
Nvidia 304.123 (nke ugbu a)
Ọzọ ọkwọ ụgbọala
Obere ihe akụrụngwa chọrọ maka Ubuntu Nwunye
512 megabytes (MB) nke RAM
8 gigabytes (GB) nke ohere diski enwere
Bootable DVD-ROM draịva
Keyboard na òké (ma ọ bụ ngwaọrụ ndị ọzọ na-egosi)
1024 x 768 ma ọ bụ ihe nlele mkpebi dị elu na nkwụnye vidiyo
Akwadoro Akụrụngwa chọrọ
Isi 2 Duo 1.6 gigahertz
16 gigabytes (GB) nke ohere diski enwere
Bootable USB flash mbanye
3D nkwụnye vidiyo na nyocha ihu na 1366 x 768 mkpebi ma ọ bụ mkpebi dị elu
Igwe okwu ma ọ bụ ekweisi
Usoro ahụ mere ezigbo ọnọdụ, enweghị m nsogbu na nke ahụ, n'agbanyeghị eziokwu ahụ Sistemụ ọ kọọrọ ụfọdụ njehie na mmepụta nke iwu dmesg na-atụ aka na systemd-logind, ma ọ bụghị na ihe niile rụzuru nke ọma.
N'ihe banyere igbu ngwa na omume windo ọ naghị adị ire dị ka m ga-achọ, nke a bụ ihe nkịtị mgbe ị na-agba ọsọ na igwe arụmọrụ na MB nke m kenyere. Na draịvụ ike ịrụ ọrụ kwesịrị ịka mma; ọ bụ ezie, na sistemụ nwere ihe ndị kacha nta dị ka ndị a kwadoro, arụmọrụ adịghị mma.
Ọ bụ ezigbo ohere maka ndị ọrụ ahụ ka na-ejigide nhọrọ ha maka Ubuntu ma ha kwagara mgbe incorporation nke Ịdị n'Otu. Ugbu a, ha nwere ụdị ọhụụ ịhọrọ n'etiti ndị enyerelarị, dị ka: Kubuntu, Lubuntu, Ubuntu-gnome, Ubuntu ọhụrụ, Ubuntustudio y Xubuntu.
Ebe nrụọrụ weebụ Ubuntu Mate: https://ubuntu-mate.org/
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Nkesa » Nyochaa: Ubuntu Mate Beta 2, desktọọpụ maka ndị nostalgic
Eji m ya kemgbe ogologo oge ejirila m di na Linux Mint na Ubuntu
nwunye na debian di nma nke oma na archlinux
Mgbe m wụnye Debian Jessie na PC m na Mee nke afọ a, ọ kabeghị MATE.
Di na nwunye na debian tinyere kde bu desktọọpụ kwụsiri ike na enweghị m nsogbu
cinnamon na mint, na gnome3 na debian bụ ihe mgbu na ịnyịnya ibu
Ana m eji cinnamon na whim mana ọ na-ejighị n'aka maka uto m mana ọ bụ ihe gnome 3 kwesịrị ịbụ ma ọ bụ nye dị ka ihe ọzọ maka desktọọpụ pc
ha mara mma nke ukwuu ma na-ahapụ ọtụtụ ihe achọrọ na nkwụsi ike maka uto m ma ọ bụ otu ikpe
Ọfọn, ọ bụrụ na m tinyeghachi Debian Jessie, m ga-eme ya karịa site na ịwụnye isiokwu greybird maka MATE iji mee ka ọ dị ka Cinnamon wee si otú a zere nsogbu. : v
na enweghi repo awụnyere ya na ubuntu ndi mmadu?
Zaghachi ka o bufee
ị nwere ike itinye ebe nchekwa mint ma hazie dabara-pinning
ma ọ bụ chọọ enwere ebe nchekwa ule, jiri ya na enweghị m mmasị na ya, ọ na-arụ ọrụ nke ọma site na mint repo
ma obu jiri ututu utopic
Ọ bụrụ na enwere, mana agbalịrị m ya ma ọ naghị arụ ọrụ nke ọma, anaghị m akwado ya, ọ bụ ppa.
ịhụ ubuntu utopic repo Agaghị m eji ya ebe ọ na-eji sistemu na ntụkwasị obi anaghị
Mint repo ka mma
Esi m na nwantịn obere nke cinnamon (m gbalịrị di ma ọ bụ nwunye) ha na-agba ọsọ karịa ịwụnye mint iji kpoo
site na mint repo ị na-eji desktọọpụ
Nke a bụ ebe nchekwa gọọmentị nke ndị ọrụ Ubuntu Mate tinyere maka ndị ọrụ Ubuntu 14.04:
Enwere m otu njikọ ahụ 14.04 + MATE 1.8.1 ọ na-arụ ọrụ dị ukwuu nye m.
Ọ bụ kwuru «Vox populi».
Zaghachi ka sputnik
Enwere nkesa ọzọ, dabere na Nnwale nke Debian, nke na-enye desktọọpụ Nwunye: Sparky Linux. O nwekwara nhọrọ desktọọpụ ndị ọzọ dịka LXDE, e18, Open Box, Xfce, Razor-Qt, wdg.
Echetara m oge ndị ahụ mgbe m jiri Ubuntu 10.10, ọ bụụrụ m sistemụ arụmọrụ kacha mma n'oge niile, ọsọ ya, nhazi ya, yana nsonaazụ Compiz bụ inye mmetụ pụrụ iche na ụdị ụdị ahụ bụ, ọ dị nwute dị ka ọtụtụ ndị maara, mgbe ọ bịarutere Everythingdị n'otu ihe niile were ngbanwe ogo 360 na-akpata oke mgbanwe nke gburugburu ma ọ bụ OS. Enwere m olile anya na ụdị ọhụụ a gbaghachitere ihe ahụ bụ nnukwu Ubuntu.
Aga m anwale ya, daalụ! 😀
Daalụ nke ukwuu @elav, m ga-eleba anya na mgbanwe ndị ahụ;). Ndokwa nke ihe oyiyi ahụ dị mma nke ukwuu, m ga-ezu ohi echiche gị = D.
Zaghachi na Percaff_TI99
Lee ezigbo ihe ncheta ọ na-eweghachi ịhụ desktọọpụ Gnome ọdịnala ọzọ!
Mgbe m gbanwere Ubuntu na mbipute 8.04 LTS m gbanwere ngwa ngwa na gburugburu ebe a. Mgbe ahụ Unitydị n'Otu wee na-eri m a bit ọzọ; mana hey, lee anyị. Ọ bụ okwu imeghe nye mgbanwe ọhụrụ.
Dị ka m maara, nakwa na mmadụ ga-agbazi m ma m mehie, na MATE ị gaghị ejikwa agba ahụ. Otu ihe ahụ na-eme XFCE. Echere m na ọ bụ ihe dị mkpa adịghị mma na-enweghị ike ịkọwa ileba anya. Nke ahụ bụ ihe kpatara m ji eji emegheSUSE KDE. Enwere m mmasị na gnome 2, n'ezie enwere m KDE 4.14 dị ka gnome 2 ^^.
Ọ bụ nyocha nke ọma nke mere na ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ m chọrọ iwepụ Antergos ma jiri Ubuntu xD ọzọ ... eziokwu bụ na m na-atụ uche desktọọpụ ahụ: nke ahụ bụ etu m si mata Ubuntu na, yabụ, GNU / Linux na 2006 -2007.
Ezi nyochaa 😀
M zutere Debian Lenny na GNOME 2. Ugbua na Squeeze, ọ ghọọ ọkacha mmasị m.
Nke a bụ otu n'ime nkesa ebe ha na - eme ka ị kwuo:
Ndị mmụọ ọjọọ! Ekwesịrị m ịwụnye Ubuntu MATE kama Debian.
Ọ dị mma, daalụ ịdị mma Debian Jessie ga-anọnyere MATE.
M chetakwara Gnome2… kedu oge !!!!!!
Site na mmasi, etinye m Ubuntu-Mate na laptọọpụ (3gbram, 1,65GHz x2), ịnwale distros na VirtualBox anaghị adabara m, ọ dịka ha na-ahapụ gị ịnwale ụgbọ ala, mana ị na-aga n'oche ndị njem, n'agbanyeghị na m ghọtara na ọ Ọ dị mkpa ma ọ bụrụ na ịnweghị akụrụngwa karịa.
Enweghị m nsogbu na beta a, nhazi ziri ezi, oke oke ebule, Igbe na ngwa mepere ngwa ngwa, 100% customizable ,. ezigbo ihe ịga nke ọma na desktọọpụ.
Ahapụla ya awụnyere maka ihe atọ. Nke mbu bu na obu beta, nke abuo na abughi mbipute LTS na nke ato bu na achobuola m ime ma obu imeghari na Gnome Shell. Mgbe Unitydị n'Otu rutere ọ mere ka m matakwuo banyere KDE (ezigbo desktọọpụ) mana n'ikpeazụ, m laghachiri na Gnome na mbipute 3. Ezi Ama, Daalụ.
Kama, ọ dị ka ịnwere ịnwale ụgbọ ala na simulator
Ọ dị ka ikiri ọdịda anyanwụ na TV
Eziokwu bụ na site na mmepe nwayọ nke Xfce oge ọ bụla Nwunye tụbara m ọzọ. M, dị ka ọtụtụ, bụ onye ọrụ Gnome 2 wee chọta ebe mgbaba m na Xfce.
M na-atụle iji dochie Xubuntu na Linux Mint 17 na Mate. Ọ bụ ezie na ọ dabeere na Ubuntu ọ dịkwa mma nke ukwuu. Ọ dị njọ na ọ bụghị LTS.
Mint 17 bụ LTS ebe ọ dabere na Ubuntu 14.04 LTS.
Ezigbo nyocha! Ọ hapụrụ uto dị mma n'ọnụ m gbasara MATE. Mana m ga-agbanwe ngwa ngwa akara ngosi oroma maka otu ndị ahụ na-acha akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ: 3. Na mpụga nke ahụ, n'oge ọ bụla m wụnye MATE na igwe Ubuntu m
Point linux-mate-zuru 3; M arụnyere ya na ọ mara mma. Debian kachasị dị na ya ma ọ na-arụ ọrụ zuru oke ana m akwado ya. Sludos
Ha nwere ike ime nyocha nke miri emi2014.1, nke a dị ebube ... ọ bụ ezie na achọtara m na ọ jọkarịrị karịa 2013, ọ bụ ihe akaebe "onye ọrụ", pịa.
Ọfọn, ụnyaahụ, ekpebiri m ịwụnye Ubuntu Mate na ọ tụrụ m n'anya, ebe m bụ onye debian karịa ubuntero, ọ tụrụ m n'anya na ọ na-arụ ọrụ nke ọma, na echere m na m ga-anọnyere ya ogologo oge. . Ọ baghị uru ikwu, ọ na-enye gị ọ joyụ ịhụ otu tebụl ị hụrụ mgbe ị malitere na nke a 4 afọ gara aga (n'ọnọdụ m).
ElementaryOS na-amasị m na Phanteon, nke mara mma. Tupu m masịrị panel Gnome n'ezie mana achọghị m ịlaghachi na oge ...
Zaghachi ka danistov
Achọghị m ịga n'ihu na oge, ọ na-eme ka anyị bịarukwuo nso oke ... akụrụngwa ụwa na-agwụ, Anyanwụ na-agba ...
Ihe omuma ihe omuma nke odida anyanwu nke ohuru adighi nma adighi m nma, nke na aru oru nke oma nye ndi nwere ihe ozo karia ngwaahịa nke ha na ere ma buru oke ego iji zuta ya. Ọ bụrụ na nke ochie na-ejere m ozi ma na-arụ ọrụ nke ọma, gịnị kpatara m ji chọọ nke ọhụrụ? Ọhụrụ m agaghị enwe ike ịme karịa ịlaghachi azụ, lee ikpe Gnome 3.
Mgbe ụfọdụ ị ga-alaghachi azụ iji gaa n'ihu ...
Ndo maka psudo trolling ire ọkụ nke m mere.
offtopic: ị na-aga inyocha gnome 3.14?
Chere nke a? https://blog.desdelinux.net/gnome-3-14-analisis/
Onwere onye nwere ike ịgwa m ka esi arụ ya? Ọ bara uru maka ndị otu egwuregwu nwere afọ ole na ole? Ọ dị mma karịa Xubuntu ka ọ bụ Lubuntu?
Echere m na ọ dị ka Xubuntu, mana ọ ka mma ka onye ọzọ jiri ya na-anwale ihe oriri.
M gbalịrị ma, ihe oriri na-eri ihe yiri nke ahụ, mana Xfce na-erepịa obere. Ka o sina dị, m na-ahọrọ nwunye n'ihi na ọ ka mma ijikọta, ọ nwere obere chinchi na nhọrọ na ihe.
Ugbo 43 dijo
Ọ bụ oge.
Ihe mbụ m mere mgbe ị wụnye nkesa, wee hụ na m nwere 5 nkebi maka 5 dị iche iche linux, bụ ịwụnye MATE. Ọ na-arụ ọrụ nke ọma, na Gnome 3 otu ihe ahụ na - eme m dị ka ọ dị na KDE 4, dị ezigbo mma, dị oke chachi, mana m furu efu. Onye ọ bụla dị ka ọ dị.
Naanị nsogbu mụ na Mate-Ubuntu nwere bụ na ọkwọ ụgbọala ọhụrụ, kọmputa m na-atụgharị. Ekwesịrị m iwepụ ha ma wụnye ndị sitere na Nvidia, ugbu a ọ na-arụ ọrụ zuru oke.
Ihe ọzọ nkefufu m, mgbe ịwụnye mmelite ha bụ 200Mg, echere m na ọ ga-abụ ntakịrị nke emelitere, amaghị m ...
Zaghachi ka seta43
Abụ m onye ọrụ GNOME ruo mgbe ntọhapụ nke nsụgharị ọhụrụ ya ruo taa, anaghị m amasị ya. Ahọrọ m iji KDE ma enwere m afọ ojuju maka otu o si arụ ọrụ.
Enweghị m ọtụtụ ihe ikwu banyere MATE, ọ bụ GNOME 2 na iji ya dị ka ị laa azụ. Ọ bụrụ na m tinye ya na kọmputa m, ọ ga - abụ ichetara m oge ochie ma m ga - akwụsị iji ya mgbe awa ole na ole gachara.
Mana hey, nke ahụ bụ ụzọ m si ele ọnọdụ ahụ anya. Agaghị m etinye onwe m n'ọnọdụ ịgwa ndị mmadụ ihe ha ga-eji, onye ọ bụla na-ahọrọ ihe kacha masịrị onye ọ bụla.
Anọla m na Mint Mate ruo oge ụfọdụ, ugbu a enwere m 17, ọ na-aga dị ka o kwesiri, dị ka ogbugba.
Na laptọọpụ nwere 4gb nke ebule na isi abuo site na 2008 ọ na-arụ ọrụ dị ukwuu, na-abaghị uru ọ na-ajụ naanị 200-220 megabytes nke ebule.
Na ịrụ ọrụ na gnome2 / mate kọmputa ọ dị mma, menu dị mma, obere ebule oriri, enwere ike ịhazi ya nke ọma. Na synapse launcher ọ nweghị desktọọpụ na-abịa nso.
Ana m eweghachi ihe m kwuru na m ga-anọ na Ubuntu Mate nwa oge, alaghachila m na Debian.
Download na - ebudata Netinst kacha ọhụrụ nke Jessie, beta 2, ma mgbe ị rutere ebe ị na-ahọrọ desktọọpụ ị họrọ Mate ma ị ga-enweta otu isi okwu ahụ na Ubuntu Nwunye, mana ya na Debian, nke na-agba ọsọ ọsọ oge niile.
Iji mee ka ihe ka njọ, a na-etinye ngwugwu murrine ahụ na ndabara, ya bụ, ị na-etinye Greybird na otu ịpị, akara ngosi faenza na-esikwa na ndabara. Na mpempe, 4 clicks na ị na-ahapụ Debian na Nwunye na-achọ oké.
a ga m atụ uche gị dijo
Echere m na ha enweghị ike iji isiokwu Ubuntu maka ihe nwebisiinka wdg XD
Eeh, ị nwere ike tinye isiokwu Ambiant Ubuntu, nsogbu adighi. Ọ bụ ihe na nbudata na ya.
Ogologo ndụ ịlụ 🙂
Achoro m ichi ulo chi nke chi ga aputa 🙂
Ọ bụghị okpokoro maka ndị na-enweghị agụụ, ma ọ dị ugbu a, maka onye ọ bụla chọrọ ịrụ ọrụ nke ọma, na enweghị nsogbu nke 'ịdị n'otu', n'etiti ndị ọzọ.
Ezigbo blog a m na-ekele gị.
Zaghachi Luis Felix
Anọ m na onye òtù ọlụlụ ubuntu nọrọ ọtụtụ afọ ma ọ na-aga nke ọma na 2GB nke ebule na 320GB nke diski ike, eziokwu bụ na enwere m obi ụtọ na okomoko ba n'ihi na eziokwu ahụ bụ na windo 10 dị mma n'otu pc, m nọrọ ya na ubuntu
Jigdo: Mepụta ma ọ bụ Budata Debian Isos Ngwa ngwa
Etu esi etinye akwukwo na GNU / Linux